မိန်းမကိုယ်မှ အဖြူဆင်းခြင်းသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသော အမျိုးသမီးတို်င်းတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်လည်း အဖြူဆင်းတာဟာ ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် အဖြူဆင်းများခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်မိန်းမကိုယ်ပိုးဝင်ခြင်း(မှိုရောဂါ)သည်လည်းအဖြစ်များသောရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သော...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုကြောင့် သန္ဓေသားကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ ဥပမာ -ကိုယ်ဝန်ရှိစအချိန်တွင် ဖောလစ်အက်ဆစ် (Folic acid) ချို့တဲ့မှုကြောင့် သန္ဓေသား၏ခွံရိုး၊ ဦးနှောက်၊ ကျောမကြီးနှင့် အာရုံကြောမကြီးများတွင် မွေးရာပါကိုယ်အင်္ဂါ ချွတ်ယွင်းမှု (Neural tube defects) များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သားသမီးယူမည့် အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတိုင်း ဖောလစ်အက်ဆစ် ကြွယ်ဝသည့် အစားအစာများကို စားသ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ Ultrasound (တယ်လီဗွီးရှင်းဓာတ်မှန်) ဘာကြောင့် ရိုက်သင့်သလဲ
-Ultrasound တယ်လီဗွီးရှင်းဓာတ်မှန် လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ မိခင်လောင်းတိုင်းက ကိုယ့်ရင်သွေးလေး ယောကျာ်းလေးလား မိန်းကလေးလား သိချင်စိတ်နဲ့ ရိုက်ကြည့်ချင်ကြတာပါ.Ultrasound ရိုက်သင့်သော အခြေအနေများ- ရာသီပေါ်ရက် မမှတ်မိသူများ- ကိုယ်ဝန် ၁၁ပတ်မှ၁၃ပတ်တွင်း ၁ကြိမ်- ကိုိယ်ဝန် ၁၈ပတ်မှ၂၁ပတ်တွင်း ၁ကြိမ်- ၂၀ ပတ် ဝန်းကျင် ရိုက်သော USG တွင် အချင်းအနေထားမမှန်...
အမျိုးသမီးများကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ဟော်မုန်အပြောင်းအလဲများကြောင့် ထူးဆန်းသော အပြောင်းအလဲအချို့ တွေ ့ကြုံရတတ်သည် ။- အသားအရေ - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ပျားရည်ကဲ့သို့ ပင်ချောမွေ့စိုပြေသောအသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတတ်သည် ။ အချို့အမျိုးသမီးများတွင်တော့ အသားပိုသေးလေးများ ပုခုံး၊ လက်မောင်း ၊ တင်ပါး နှင့် အမျိုးသမီးအဂါင်္ တစ်ဝိုက်တွင်ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။(ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးချိန်တွင် ပြန်လ...
ရာသီစက်ဝန်းဆိုလို့ နွေ၊မိုး၊ဆောင်း ဥတုရာသီလို့ စဉ်းစားမိသွားလား။ ဆရာမပြောချင်တဲ့ ရာသီစက်ဝန်း ဆိုတာက အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာလာတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာပါ။ ဆရာမတို့လို မြန်မာမိန်းမသားတွေအနေနဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး အသိပညာနည်းပါးတာကြောင့် အပျိုဖော်ဝင်ရင် ရာသီစလာမယ်။ တစ်လတစ်ခါလာမယ်။ အသက် ၄၅-၅၅ ဆိုရင် သွေးဆုံးမယ် စသဖြင့်ပဲ သိထားကြတာလေ။ ဆရာမ ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း ဒီအကြောင်း အမြဲ...
ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် ပြတတ်သော လက္ခဏာများ
on: 22 Mar, 2017
အမျိုးသားနှင့်အတူနေပြီး ၂ ပတ်ကျော်နောက် ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ တွေဝေစဉ်းစားရခက်နေလျှင် အောက်ပါလက္ခဏာများလဲ ပြတတ်သည် ။ - ပုံမှန်ထက်ပို၍အမောမခံနိုင်ခြင်း သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အောက်ဆီဂျင်ခွဲဝေပေးရသည့်အတွက်ကြောင့် အမောမခံနိုင်ဖြစ်လာတတ်သည် - ရင်သားများ တင်းလာခြင်း ပိုကြီးလာခြင်း သွေးကြောများပိုထင်းလာခြင်းတို့လဲဖြစ်တတ်သည် - ပျို့အန်ခြင်း (ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး ၆ ပတ်အ...
၁။ အသား၊ ငါး၊ နို့၊ ကြက်ဥနှင့်ပဲ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားပါ။ ၂။ နေ့ဘက်တွင် (၁) နာရီခန့် ဘေးစောင်းလဲ၍ နားပေးပါ။ ပက်လက်အနေအထားဖြင့် လုံးဝမအိပ်ရ။ ၃။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အသင့်အတင့်လုပ်ပါ။ ကြမ်းတမ်းသောအလုပ်နှင့် အလေးအပင် မသော အလုပ်များကိုရှောင်ပါ။ ၄။ တစ်ကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေး အထူးဂရုပြုပါ။ သွားများသန့်ရှင်းရန် နံနက်၊ ညနှင့် အစာစားပြီး ပါးစပ်ဆေးပါ။ သားမြတ်ကို ရေချိုးစဉ်...
ရင်သားကင်ဆာဟာ အမျိုးသမီးတိုင်း ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ အဖြစ်အများဆုံး ကင်ဆာဖြစ်ပြီး သေဆုံးမှု အမြင့်ဆုံး အမျိုးသမီး ကင်ဆာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာကို ဗြိတိန်မှာတစ်နှစ်လျှင် ဝေဒနာရှင် ၃၅ဝဝဝ ခန့် ဖြစ်လေ့ရှိပြီးအမျိုးသမီး ၁ဝ ဦးမှာ တစ်ဦးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ယနေ့ ခေတ်ကာလ ရင်သားကင်ဆာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းကောင်းနဲ့ ဖြစ်ပွားမှုအပေါ် လုံးဝပျောက်ကင်း သို့မဟုတ် သက်တမ်းစေ့ နေနိုင် ရေး နည်းလမ်းကောင်းတွေ ရ...
၁။ သားပျက်သားလျှောတယ်ဆိုတာဘာလဲ? ကိုယ်ဝန် ၂၂ ပါတ်မတိုင်ခင် သားအိမ်ထဲက သန္ဓေသား (သို့) အချင်းထွက်ကျ တာကို သားပျက်သားလျှောတယ် (ကိုယ်ဝန်ပျက်တယ်) လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ချို့က အလိုအလျှောက် သားပျက်တာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့က ကလေးမလိုချင်လို့ တမင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၂။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတယ်ဆိုတာဘာလဲ? ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတယ်ဆိ...
ရာသီမပေါ်ခင် အမျိုးသမီးတွေ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာစု
အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ PMS ခေါ်တဲ့ ရာသီသွေးမပေါ်ခင် ခံစားရ တဲ့ ဝေဒနာစု ရှိပါတယ်။ အဲဒီ PMS မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓာနာကျင် ကိုက်ခဲတာနဲ့ တွဲဖက်ပေါ်ပေါက်တာရှိသလို မတွဲဖက်ဘဲလည်း စိတ်ပန်း၊ စိတ်ဒုက္ခ ခံစားရတာလည်း ရှိပါတယ်။ တွေ့ရတဲ့အချိန်ကာလ ၂၈ ရက် (တချို့လည်း ၂၅-၂၆ ရက်) တစ်ကြိမ်မျိုးဥကြွေတဲ့ ရာသီစက်ဝန်း (menstrual c...